May I help You.......- စာမျက်နှာ 30 — MYSTERY ZILLION
မူလ › Sharing › File Request
May I help You.......
March 2010 edited March 2010 Administrators
ကိုဦး wrote: »
proxyfire Full Version လေးလိုချင်လို ့ပါဗျာ ..
အဆင်ပြေမယ်ဆိုရင် တင်ပေးကြပါအုန်း ..
March 2010 edited March 2010 Registered Users
JXD661 မူရင်း Driver ခွေလေးရှိရင်တင်ပေးပါလားဗျာ
West Hero wrote: »
အဲဒီမှာဒေါင်းပြီးပါပြီဗျာ။ XJ-20087914165028449.rar ဖိုင်တစ်ဖိုင်ရပြီးဖြည်လိုက်ရင်Winter.jpg ဆိုတဲ့ windows sample picture ပုံပဲပါတယ်။
ကျွန်တောှ့အထင် အဲဒီစက်တွေက driver မလိုလောက်ဘူးထင်တယ် computer က auto detect သိမယ်ထင်တယ် ။ နောက်ပြီး သူ့ အောှရီဂျင်နယ် အခွေမှာပာတာက video ပြောင်းတဲ့ software လောက်ပဲပာမယ်ထင်တယ်ဗျ ... ကျွန်တောှ တစ်ခြား link တွေကနေလိုက်ရှာတာမတွေ့ဘူး ဆောရီးဗျို့ ..
ရိုးရိုး Storage Device အနေနဲ့ဆိုရင်မလိုပေမယ့် Webcam အနေနဲ့ဆိုလိုတယ်ဗျ။ ca536 Driver ဆိုလားမသိဘူးဗျနာမည်မေ့တော့ရှာရခက်နေလို့ပါ။အခုပဲသူငယ်ချင်းတစ်ယောက်ကပို့ပေးမယ်ဆိုလို့အဆင်ပြေသွားပါပြီ။ဘာပဲပြောပြောကူရှာပေးလို့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကို exit:)
ကူညီပါအုံး ifile.it ကနေရမယ်ထင်တယ် တင်ပေးပါအုံး
အနော်က တော့ proxy ကျော်ချင်လို့
proxy ကျော်တဲ့ site တွေပြောပြပါလားပြောလို့ရရင် ပေါ့ဗျာ
proxy inspector latest version လေးလိုချင်လို့ပါ။ ကူညီပေးနိုင်မလားဟင်။
UniblueRegistry Booster Fullversion လေး လိုချင်ပါတယ်..
UFS explore professional full version လေးပါ လိုချင်ပါတယ်.. မစ ကျပါ..........
chocho wrote: »
ifile.it ကနေပြန်တင်ပေးထားပါတယ် ..
Hailo wrote: »
ifile.it ကနေပြန်တင်ထားပေးပါတယ် ..
ဖိုးသိချင် wrote: »
mediafire ကဖြစ်ဖြစ် ပြန်တင်ပေးပါလား..
mars wrote: »
ကျနော်ဘယ်လိုမှရှာလို့မရတော့လို့အကူအညီတောင်းတာပါ... ကျနော့် Dell Laptop 1564 အတွက် function key တွေနဲ့ ရောပြီးပါလာတဲံ media key ခေါ်မလားမသိဘူး.. အဲဒိ shortcut key လေးတွေက အလုပ်မလုပ်တော့ဘူးဖြစ်နေတယ်.. ကျနော်ထင်တာ Driver များလိုလားမသိဘူး.. ကျနော်ရှာတာလည်းမရဘူးဖြစ်နေလို့... ပြီးတော့ webcam အတွက် Dell webcam manager ကို သူရဲ့ official site မှာပဲ သွားဆွဲထားတာ... မှားလို့လားမသိဘူး... install လုပ်ရင် error ပြတယ်... webcam ကတော့ vzo နဲ့ဖွင့်ရင်တော့ပြတယ်... ဒါပေမယ့် ကျနော်က ရုပ်ပြောင်လေးတွေဘာလေးတွေနဲ့ photo ရိုက်ချင်ရင် အရင်က သူ့ရဲ့ original webcam manager ကနေသွားပြီး သုံးနေကျမို့ အခုက window ပြန်ပြောင်းထားလို့ အဲဒါတွေကို သုံးလို့မရဘူးဖြစ်နေတယ်... ရှာတာလညး်မရတော့လို့.. ကူညီပေးပါဦးဗျာ....
အပောှမှာပေးထားတယ်လေ ...ထပ်ပေးလိုက်ပာ့မယ် ..
Webroot internet security essential 2010 လေးလိုချင်လို ့ပါ
ReverseMe ကိုလိုချင်လို့ပါဗျာ။ ရှာပေးနော်။ နောက်ဆုံးဗားရှင်းလေး။ မြန်မြန်လေးလဲလုပ်အုံးနော်။
April 2010 edited April 2010 Registered Users
ယနေ့ ညနေ ငါးနာရီ Park Royal Ball Room 1 တွင် ကျွန်တော့ မင်္ဂလာဆောင်ရှိပါတယ်... အားလုံးကို ဒီကနေ ဖိတ်ပါတယ် ခင်ဗျာ. လက်ဖွဲ့ခြင်းသည်းခံပါ။ အသေးစိတ်ကို သို့ ဆက်သွယ်စုံစမ်းနိုင်ပါသည်။ ဘယ်ကနေ ရေးရမှန်းမသိလို့ ဒီကနေပဲ အမြန် ကြော်ငြာလို်က်ပါတယ် ခင်ဗျာ
ယနေ့ ညနေ ငါးနာရီ Park Royal Ball Room 1 တွင် ကျွန်တော့ မင်္ဂလာဆောင်ရှိပါတယ်... အားလုံးကို ဒီကနေ ဖိတ်ပါတယ် ခင်ဗျာ. လက်ဖွဲ့ခြင်းသည်းခံပါ။ အသေးစိတ်ကို သို့ ၀၉ ၅၀ ၄၄၅၁၅ ဆက်သွယ်စုံစမ်းနိုင်ပါသည်။ ဘယ်ကနေ ရေးရမှန်းမသိလို့ ဒီကနေပဲ အမြန် ကြော်ငြာလို်က်ပါတယ် ခင်ဗျာ
April 2010 edited April 2010 Moderators
emo wrote: »
အို လာစားဖို ့ဖိတ်တာလား စာမေးပွဲရှိလို့လာမစားနိုင်တာခွင့်လွတ်ပါဗျာ ချမ်းမြှေ ့သာယာပြီး ကြည်နူးချမ်းသာတဲ့ အိမ်ထောင်ရှင်ဘ၀ကိုပိုင်ဆိုင်နိုင်ပါစေလို ့အွန်လိုင်းကနေ ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်ဗျာ
ကျွန်တော်လည်း တောင်းအုံးမယ်။အခု proxy တွေသုံးတာမရတော.ဘူးကွာ။ဆော်ဒီက free proxy လေ။ polysolve နဲ. hide-our.info လည်းမရတော.ဘူး။ဘယ်လိုကျော်ခွရမယ်ဆိုတာကိုပြောပေးပါအုံး။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
ReverseMe ဆိုတာလေးလိုချင်ပါတယ်။ ညံညံလေးလုပ်ဘာအုန်း...:eek:
ကျွန်တော့်စက်က Window7 32Bit ကတစ်ခါတစ်လေဆိုရင် အပြာကြီးတတ်လာတယ် ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ အောက်မှာတတ်လာတဲ့ ERROR လေးကို ရေးပေးလိုက်တယ် ကူညီဖြေရှင်းပေးပါဗျာ
May 2010 edited May 2010 Registered Users
အကိုုရေ ကျ ွန်တော်ကတော့ window hacking tool တခုဖြစ်တဲ့ koonbot software with( memory stick) update link လေးလိုချင်လို့ပါ pls
can you shaer my bro
i need you help ! bro
May 2010 edited May 2010 Moderators
fireboard plugin လေးဒေါင်းချင်လို ့ကူညီပါဦး
joomla ဆိုဒ်ကလည်း register မလုပ်ချင်လို ့
အကိုတို့ ကူညီပေးအုံးနော် format factory software လေး လိုချင်လို့့့ပါfull version ရရင် ကူညီပေးနော် ကျေးဇူး
အစ်ကို တို့ ရေ Fomat Factory Software Full Version လေးလိုချင်ပါတယ် မစပေးပါနော် ကျေးဇူးတင်ပါတယ် မသိခြင်းကိုလမ်းပြပေးတဲ့ သိရှိသူများ ကျန်းမာကြပါစေ
Kon Boot လေးလိုချင်လို့ပါ
May 2010 edited May 2010 Administrators
Format Factory 1.80
ice-cube wrote: »
Link Source :
စာရိတ္တမောင် wrote: »
Xilisoft iPot Rip ရဲ့ User Name & License Code
Pot to PC 3.224 ရဲ့ Registry number တို့ကိုလိုချင်လို့ပါ...
bro တစ်ခြားဆိုဒ်ကနေပြန်တင်ပေးလို့မရဘူးလား ဟင် ifile ဖြစ်ဖြစ် mediafire ဖြစ်ဖြစ်ပေါ့ ကျေးဇူးနော်
ိdvd to vcd ကိုပြောတာပါ..........http://rapidshare.com/files/6260626/XiliSoft_DVD_Ripper_Patinum.rar
superior wrote: »
Genie-Soft ရဲ့ Outlook Express Backup V6.5 full version
များ ရှိရင်လိုချင်ပါတယ်ဗျာ ... ကျေးဇူးပြုပြီး ကူညီပေးပါအုန်း ...
teamViewer full version လေးရှိရင်လုပ်ပါဦး အကိုရာ
လေပြည် wrote: »
full version လို့ရှိလို့လား filehippo.com မှာ အလကားပေးတယ်
June 2010 edited June 2010 Registered Users
cafezee software လိုချင်လို့ပါ Thread မှာ ကိုတက်လူပေးထားတဲ့ cafezee 9.9 version က crack file လေးကိုလိုချင်လို့ပါ ..... ကျွန်တောင်ထားတာ reply မလာတော့လို့ ပါ ...... ကူညီနိုင်ရင်ကူညီပေးပါနော်....
CafeSuite software, CafeStation.exe မှာ Error >can't load BUStil.dll လို့ဖြစ်နေတယ် အဲဒါ ဘယ်လိုကြောင့်ဖြစ်နေတာလဲ တစ်ချက်လောက်ရှင်းပြပေးပါအုံး
dreamwaver cs3 classroom in abook ထဲမှာပါတဲ့
အခန်း 12 ခန်းကလေ့ကျင့်၇တဲ့ lesson file 12 ခန်းကိုလိုချင်ပါတယ်
July 2010 edited July 2010 Registered Users
sorry for my late reply as i haven't see the thread~
naylin4u wrote: »
Please, I want license keys for Babylon version 8.
အကို branaung ရေ အောက်က link မှာ ရှိတယ်ဗျ
October 2010 edited October 2010 Registered Users
အကိုတို့ရေ ကျွန်တော်ကတော့ trojan killer full version free ဆိုတော့ ဘယ်ရမလဲ အလကားရနည်းဆိုပြီး .... ....ကောက် ်ဒေါင်းလိုက်တာ..... unregister ဖြစ်နေလို့ activated ဖြစ်စေမယ့် key လေး crack လေးဘာလေးများရှိရင် မစကြပါအုံး..:redface::redface:
October 2010 edited October 2010 Moderators
Free Download Link လေးတွေရှာပြီးပေးလိုက်တယ်။ ရမရတော့ မစမ်းရသေးဘူး။ အဆင်မပြေရင်ပြောပေါ့ ..
November 2010 edited November 2010 Registered Users
ကျွန်တော် cafezee software လေးလိုချင်လို့ပါ ကျွန်တော်ကိုကူညီနိုင်မယ်ဆို [email protected] ကိုအပ်ပေးပါအကိုတို့ရာ လက်ဖက်ရည်တိုက်ပါ့မယ် း) တကယ်ကိုအကူညီလိုနေလို့ပါ ကျွန်တော် ဖုန်းနံပါတ်က 539664 ပါအချိန်းမရွေးဆက်ပါ..ကျွန်တော် ဒီwebsite ကိုကောင်းကောင်းမသုံးတက်လို့ပါ reply ကိုဒီကမပြန်ပါနဲ့နော် ကျွန်တော် email လေးကိုအက်ပေးကြပါ ကျေးဇူတင်ပါတယ်
Cyberlink Power DVD 10 Full Version လိုချင်လို့ပါ.....